Famandrihana tsy misy komisiona ho an'ny orinasanao fitantanana fananana
Raiso ny famandrihana avy amin'ny OTA sy ny tranokalan'ny famandrihana mivantana tsy andoavanao komisiona any amin'i Zeevou.
Betsaka ny mpampiantrano mandray vahiny any - na hotely, trano fandraisam-bahiny, trano fandriana sy sakafo maraina, na mpandraharaha marobe fialan-tsasatra amin'ny trano fialan-tsasatra na trano misy serivisy, dia miezaka hatrany manatsara ny haavon'ny toerana onenan'izy ireo. Iray amin'ireo fomba haingana indrindra hanaovana izany ny fizarana ny lisitr'izy ireo amin'ny alàlan'ny OTA an'ny antoko fahatelo sy ireo toerana misy lisitra.
Mitazona ny tahan'ny sy ny fisian'ny fampifanarahana ary ny fanaovana automatique ny fitadiavana famandrihana, a mpitantana fantsona afaka tonga amin'ny mora raisina. Na izany aza, amin'ny tranga maro, ny mpitantana fantsona dia handoa ny isan-jaton'ny sanda famandrihana eo ambonin'izay ampandoavin'ny maso ny mpampiantrano. Izany dia niafara tamin'ny fanoherana ny tanjona tany am-boalohany tamin'ny fizarana ireo fantsona ireo, dia ny fanandramana hampitombo ny haavon'ny tombony amin'ny fihinanana ny fidiram-bolan'ny mpampiantrano.
Ahoana ny fomba hanampian'ny Booking Free Commission an'i Zeevou?
Ao amin'ny Zeevou dia takatray ny tolona isan'andro ataon'ny orinasa mandray vahiny, ary noho izany dia nandinika tsara ny anay izahay Pricing rafitra. Rehefa nanangona hevitra avy amin'ny mpampiantrano maro izahay dia nanapa-kevitra ny handoa sarany fisaka isaky ny lisitra, izay milatsaka rehefa mitombo ny isan'ny lisitra.
Midika izany fa tsy mitaky sarany na komisiona fanampiny i Zeevou ho an'ny famandrihana izay mandalo amin'ny alàlan'ny mpitantana ny fantsony. Amin'ny maha-mpampiantrano anao dia ho afaka mankafy ny fidiram-bola fanampiny azonao atao ianao amin'ny alàlan'ny fandefasana matetika 200 channel amin'ny alàlan'i Zeevou.
Inona koa, Zeevou's tranokala famandrihana mivantana tonga maimaimpoana. Midika izany fa tsy misy sarany fametrahana azy, tsy misy fiampangana fanampiny fanampiny, ary tsy misy komisiona na sarany ho an'ny famandrihana natao tamin'ny alalàn'izy ireo. Ho bonus, Zeevou Partner Hosts dia afaka mizara maimaimpoana amin'ny alalàn'ny Zeevou Direct.